Madaxda Woqooyi Bari Kenya oo nacay Qaxootiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hoggaamiyeyaasha gobolka waqooyi-bari ee dalka Kenya ayaa ka dalbaday dowladda Kenya in ay dib ugu celiso dalkooda, qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha Dhadhaab.
Mas’uuliyiinta waqooyi-bari oo uu horkacayo hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya, Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in xeryaha qaxootiga ay gabaad u noqdeen kooxaha argagixisada.
Ducaale ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay fududeeyaan dib u celinta qaxootiga si ay dowladdu ula dagaallanto argagixisada.
Hadalkan ayaa yimid maalmo kaddib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadday jaamacadda Garissa oo ay ku dhinteen 148 qof.
Mas’uuliyiinta ayaa xusay in kooxaha weerarrada soo maleego ay xeryaha ka soo qorsheeyaan weerarradooda.
“Argagixisadu waxay xeryaha u isticmaalaan saldhigyo ay dadka ka qortaan, dadka deegaanka waa in ay la shaqeeyaan booliiska si la isaga qabto dambiilayaasha’’, ayuu yiri yiri Ducaalle.
Guddoomiyaha maamulka Garissa Nadiif Jaamac ayaa isna sheegay in ay taageerayaan in bulshada laga wacyigeliyo ka hortagga argagixisada, wuxuuna ugu yeeray culimada in ay qaataan doorkooda fahamsiinta saxda ah ee diinta.
“Waa in aan si wadajir ah u galnaa dagaalkan. Iskaashi aan la sameyno ciidamada amniga ayaa suulin karno argagixisanimada’’, sidaas waxaa yiri guddoomiyaha Mandheere Cali Roba.
Xukuumadda Kenya ayaa bandaw ku soo rogtay magaalooyinka Garissa, Wajeer, Mandheere iyo Tana-River kaddib markii uu dhacay weerarkii Jaamacadda.